Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်)
Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
oxymetazoline hydrochloride ကို အများအားဖြင့် အောက်ပါအကြောင်းအရာများအတွက် အများဆုံး အသုံးပြုပါသည်။
အအေးမိခြင်း၊ တုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်း၊ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲတွင် ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ
နားကို လေဖိအားပြင်းပြင်းဖြင့် ထိခိုက်မိခြင်းများတွင် ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။
oxymetazoline hydrochloride ကို Schistosoma mansoni သန်ကောင်ကြောင့်ဖြစ်သော သန်ရောဂါများကို ကုရန်အများဆုံး အသုံးပြုပါသည်။ ထိုရောဂါသည် အာဖရိကတိုက်တွင် ရေတွင်းရေကန်များမှ ကူးစက်သော ရှားပါးသည့်ရောဂါဖြစ်ပါသည်။
Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကို နှာခေါင်းတွင်းသို့ ဖြန်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးရည်ထဲ့ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
ထိုအရာများကို အသုံးမပြုမီ ပြင်ပလေထုတွင် အကြိမ်ကြိမ်ဖိနှိပ်ပါ။
ဖြန်းဆေး သို့မဟုတ် ဆေးရည်ကို နှာခေါင်းတပေါက်စီအတွင်းသို့ ဖြန်းပါ။ ခေါင်းကိုမော့ပြီး ဖြန်းပါ။
ဆေးကို မျက်သားလွှာပေါ်သို့ အစက်ချပြီး ထည့်ပါ။
မျက်သားလွှာနှင့် အစက်ချဆေး၏ ထိပ်ဝကို မထိပါစေနှင့်။
ဆေးစက်မချမီ မျက်ကပ်မှန်များကို ချွတ်ထားပါ။
မျက်စဉ်းဆေးသည် အရောင်နောက်နေခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းနေခြင်းများရှိပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။
Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
oxymetazoline hydrochloride ကို အခန်းအပူချိန်မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ oxymetazoline hydrochloride ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ oxymetazoline hydrochloride ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
oxymetazoline hydrochloride ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
oxymetazoline hydrochloride ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
oxymetazoline hydrochloride ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
သင့်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ဆေးကို ၃ ရက်ထက်ပိုသုံးခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရပါ။ ထိုဆေးကို မကြာခဏ အသုံးပြုခြင်း၊ ရေရှည် စွဲသုံးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါက နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းများ မကြာခဏ ပြန်ဖြစ်ခြင်း၊ ပိုဆိုးလာခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည်။
ယခုဆေးကို အခြားသူများနှင့် ဝေမျှသုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။ ရောဂါ ကူးစက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဆေးသည် ဆီးချိုသမားများတွင် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို များစေသောကြောင့် oxymetazoline hydrochloride ကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ဆီးချိုဆေးများကို ဆရာဝန်က ညှိပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ယခုဆေးဝါးကို အသက် ၆ နှစ်အောက် ကလေးများတွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးသုံးကာစတွင် ခဏတာ ပူခြင်း၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
oxymetazoline hydrochloride ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အောက်ပါဆေးများသည် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သောဆေးများ ဖြစ်ပါသည်။
Tricyclic antidepressants (e.g., amitriptyline) စိတ်ကျရောဂါ သောက်ဆေးများသည် ၏အာနိသင်ကို လျော့သွားစေပါသည်။
Cocaine, furazolidone, MAO inhibitors (e.g., phenelzine), tricyclic antidepressants (e.g., amitriptyline) စသည့်ဆေးများသည် oxymetazoline hydrochloride ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်းတို့ကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါသည်။
Bromocriptine , cocaine တို့သည်လည်း oxymetazoline hydrochloride ၏ဆေးအာနိသင်များနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
oxymetazoline hydrochloride က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
oxymetazoline hydrochloride ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
သိုင်းရွိုက်ဂလင်း လုပ်ဆောင်မှု လွန်ကဲခြင်း
နှလုံးရောဂါ စသည်တို့ရှိလျှင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
နှာခေါင်းပိတ်သူများတွင် နှာခေါင်းအတွင်းသို့ ဖြန်းရန်
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ oxymetazoline hydrochloride 0.05%နှာခေါင်းဖြန်းဆေး ကို နှာခေါင်း တပေါက်စီအတွင်းသို့ ၂ ချက် ၃ ချက် ဖြန်းပါ။ ၁၀- ၁၂ နာရီခြား တနေ့လျှင် ၂ ကြိမ်အထိ ဖြန်းနိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ oxymetazoline hydrochloride 0.05%မျက်စဉ်းဆေးကို ဖြစ်သော မျက်လုံးတွင် သို့ ၆ နာရီခြားတစ်ခါမှ လိုအပ်သလို ခတ်နိုင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၆နှစ်နှင့် အထက်ကလေးများတွင် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ oxymetazoline hydrochloride 0.05%နှာခေါင်းဖြန်းဆေး ကို နှာခေါင်း တပေါက်စီအတွင်းသို့ ၂ ချက် ၃ ချက် ဖြန်းပါ။ ၁၀- ၁၂ နာရီခြား တနေ့လျှင် ၂ ကြိမ်အထိ ဖြန်းနိုင်ပါသည်။
အသက် ၆နှစ်နှင့် အထက်ကလေးများတွင် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ oxymetazoline hydrochloride 0.025%မျက်စဉ်းဆေးကို ဖြစ်သော မျက်လုံးတွင် သို့ ၆ နာရီခြားတစ်ခါမှ လိုအပ်သလို ခတ်နိုင်ပါသည်။
Oxymetazoline Hydrochloride (အောက်ဆီမီတာဇိုလင်း ဟိုက်ဒြိုကလိုရိုက်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
oxymetazoline hydrochloride ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
oxymetazoline hydrochloride 05%နှာခေါင်းဖြန်းဆေး
oxymetazoline hydrochloride 05%မျက်စဉ်းဆေး
oxymetazoline hydrochloride ကိုသုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Oxymetazoline solution. https://www.drugs.com/cdi/oxymetazoline-solution.html.
Accessed December 14, 2016.